युगसम्बाद साप्ताहिक - पर्यटक भित्र्याउने गुरूयोजना
Thursday, 05.28.2020, 03:26am (GMT+5.5) Home Contact
पर्यटक भित्र्याउने गुरूयोजना
Tuesday, 03.27.2018, 12:13pm (GMT+5.5)
यात्रा– ज्ञान, अनुभव नौलो अनुभूति प्राप्तिको प्रमुख माध्यम हो । विश्वकाा अचम्म अचम्मका तथ्य यात्रीहरूले नै पत्ता लगाएका हुन् । पौराणिककालदेखि नै यात्रालाई महत्वपूर्ण स्थानन दिइएको छ । यात्राबाटै ज्ञान आर्जन हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । आधुनिककालमा यात्रीलाई पर्यटक भनिन्छ । पर्यटक त्यस्ता हुन्छन्, जो नौलो नयाँ कुराको खोजीमा, नयाँ कुराको अनुभूति गर्न निस्कन्छन् । यात्राका लागि नेपाल विश्वकै अग्रणी मुलुक हो ।
पर्यटक भनेका घुमन्ते हुन् । उनीहरू नौलो अनुभूतिका लागि यात्रामा निस्कन्छन् । नेपाल पर्यटनका लागि संसारकै उत्कृष्ट गन्तव्यमध्ये एक हो । यहाँको भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र जैविक विविधता विश्वकै लागि अनौठो छ । अनि नेपालको सामाजिक र पारिवारिक बनावट तथा यहाँको स्थानीय परिकार पर्यटकका लागि आकर्षण मात्र हैन आश्चर्यको विषय हो ।
नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि यही नै प्रमुख आधार हुन् र पर्यटन शहरी क्षेत्रमा हैन ग्रामीण क्षेत्रमा नै बढी रमाउँछन् । तर, नेपालको ग्रामीण पर्यटनको सुरूवात मात्र भएको छ । होमस्टे अवधारणाले ग्रामीण पर्यटनको विकास भएको छ । पर्यटकहरू गाउँगाउँ पुग्न थालेका छन् । तर, अझै पनि बढीभन्दा बढी पर्यटक शहरकेन्द्रित छन् । काठमाडौं, चितवन, पोखरा, जस्ता ठाउँ नै मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र भन्दै प्रचारित छ । र अधिकांशको बाह्य पर्यटकको आगमन पनि तिनै क्षेत्रमा हुने गरेको छ ।
सरकारले सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । स्मरणीय कुरा के हो भने पर्यटकको संख्या बढेर मात्रै आर्थिक लाभ हुँदैन । पर्यटनको विविध आयाम र पक्षलाई वर्गीकरण गरेर गुरूयोजना नबनाउँदासम्म पर्यटनबाट मुलुक समृद्ध तुल्याउने सपना सपनामै सीमित हुनेछ । मुख्य कुरा, पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी समय नेपाल बसाउने र बढीभन्दा बढी खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि भुटानको मोडल सिक्नु आवश्यक हुनेछ ।
विगतमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा कमजोर मुलुक भुटानको आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय दक्षिण एसियामा उच्च छ । उसले जलविद्युत र पर्यटनबाट मनग्गे कमाइ गरेको छ । पर्यटन र जलस्रोतमा भुटानको प्राण अडिएको छ । उसले सोही अनुसारको नीति–रणनीति बनायो अनि विकास ग¥यो । धर्म, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण गर्दै पर्यटक आकर्षित गरिरहेको भुटानको विपरीत नेपालमा सामाजिक–धार्मिक मूल्य–मान्यता मासेर आयातित संस्कृति लाद्न थालिएको छ । पश्चिमा संस्कृति हेर्न पश्चिमी पर्यटक नेपाल आउँदैनन् ।
मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक स्रोतको स्रोत पर्यटन विकासका लागि आधुनिकता हैन परम्परागत कुराहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बताइराख्नुपर्ने कुरा हैन । नेपालमा आउने पर्यटकलाई केबल कार, बातानुकूलित कोठा भएका होटल मात्रले आकर्षित गर्दैन । तीसंगै उनीहरूले छनोट गर्नसक्ने पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ । आज होमस्टेहरूमा किन विदेशीहरू ओइरिएका छन् ? यही कुरालाई मनन् गर्ने हो भने पर्यटन विकास गर्ने योजना आफैं बन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७ वटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक छन् । तर ती क्षेत्रमा जाने सडक कस्तो छ ? त्यहाँको वातावरण कस्तो छ । स्मारकहरू गगनचुम्बी भवनले छेकिसकेका छन् । यिनको संरक्षण गर्ने योजना खै ? विश्वभरका हिन्दुहरूको आराध्यदेव पशुपतिनाथ, विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ । अनि तीन जिल्लाको दरबार क्षेत्र, चाँगुनारायण जस्ता स्मारकहरूमा कति पर्यटक पुग्छन् वर्षमा ? अनि ती क्षेत्र पुग्ने पर्यटकको कस्तो प्रतिक्रिया छ ? फोहोर, धुलो, अतिक्रमणको घेराबन्दीमा परेका सम्पदाहरूले कसरी पर्यटक आकर्षित गर्ला ? पर्यटक कंक्रिटको जंगल हेर्न हैन हरियाली हेर्न आउने हुन् । प्रकृतिसंग निकट रहनन आउने हुन् । यस्ता हजारौं स्थान नेपालमा छन् । यिनको प्रबद्र्धन आवश्यक छ ।
विकास गर्न नारा हैन योजना चाहिन्छ । राम्रो काम जहाँबाट पनि सिक्दा हुन्छ । भुटानले दिगो पर्यटनका लागि ‘हाइ भ्यालु लो इम्प्याक्ट’ नीति अपनाएको छ । यसका लागि उसले हरेक पर्यटकले पिक सिजनमा दैनिक २ सय ५० अमेरिकी डलर र अफ सिजनमा २ सय अमेरिकी डलर खर्च गर्नैपर्ने गरी प्याकेज प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । नेपालले यसै गरी पर्यटकहरूका लागि विभिन्न किसिमका आकर्षक प्याकेज प्रोग्रामहरू प्रस्तुत गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी बढ्नेछ भने अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्बिएर थप आम्दानी हुनेछ । साथै नेपालको स्थानीय कला, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पुग्नेछ ।
तर, यसतिर कसैको ध्यान छैन । पर्यटन विकासका लागि अपार सम्भावना भए पनि जलस्रोतको जस्तै पर्यटन विकास पनि नारामा सीमित छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत जति मात्र योगदान यो क्षेत्रको छ । यो योगदान कम्तिमा २० प्रतिशत पु¥याउन सजिलै सकिन्छ । तर, यसका लागि स्पष्ट योजना चाहिन्छ । पर्यटन विकासको दीर्घकालीन गुरूयोजना बनाउँदा यसले शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्मको आर्थिक उन्नति हुनेछ । पर्यटकहरू पिज्जा र बर्गर हैन, नेपाली माटोमा उत्पादन भएका कृषिपैदावारमा रूची हुन्छ । समुद्रका माछा हैन, पोखरी र खोलाका मान्छा खान्छन्, टिनको डब्बामा भरिएका मासु हैन ताजा मासु खान आउँछन् । यसैका लागि उनीहरू नेपाल आउने हुन् । बर्गर र पिज्जा उतैको दैनिक खाना हो, महंगा मोटर, विलासी कोठा उनैका देशमा छन् । यसैबाट वाक्कदिक्क भएर प्रकृतिको निकट रहन उनीहरू नेपाल आउने हुन् ।
भौतिकवादी र एकल जीवनले दिक्क भएका पश्चिमी सभ्यताका मानिसहरू नेपालको संयुक्त परिवार, यहाँको सामाजिक सद्भाव, रीतिरिवाज अनि कला–संस्कृतिको अवलोकन गर्न उनीहरू आउने हुन् । होटलहरूका पश्चिमी नाचगानभन्दा नेपाली लोकदोहोरी र नृत्य उनीहरूको रूचीको विषय हो । यसको सम्बद्र्धन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । कसरी एउटा घरमा तीन पुस्ता बसिरहेको छ ? यो प्रचार गर्नुपर्ने विषय हो । तर, अहिले यही संस्कार भत्काइँदैछ । यहाँ चर्च हेर्न पनि पर्यटक आउँदैनन्, मन्दिर, गुम्बा उनीहरूको आकर्षणको केन्द्र हो । तर, मन्दिर मासिंदै जाने र चर्च बढ्दै जाने भैरहेको छ । पर्यटन विकासका लागि यो घातक पक्ष हो ।
पर्यटकका लागि हिमालदेखि तराईसम्मको मौसम, प्राकृतिक सम्पदा र जनजीवन मुख्य आकर्षणको विषय हो । तर, यसको प्रबद्र्धनको साटो जंगल मासेर केबल कार जडान हुँदैछ । हो, केबल कारले आन्तरिक पर्यटन बढ्छ, बाह्य बढ्दैन । मनकामना र चन्द्रागिरि यसैको उदाहरण हो । ती दुई धार्मिक क्षेत्रमा जान केबलकारसंगै व्यवस्थित पदमार्ग हुनुपर्दछ । यस्ता पूर्वाधार अन्यत्र पनि बनाइनुपर्दछ । धार्मिक पर्यटनका लागि यो महत्वपूर्ण पाटो हो ।
हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने नेपालको पर्यटन विकास पिज्जा र बर्गरको बजार विस्तार गरेर हुँदैन । स्थानीय परिवारको प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । यसका विविध आयाम र पक्षलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । कृषि र पर्यटनलाई जेड्न सके मात्र पर्यटनको दीगो विकास सम्भव छ । आज कृषि, पर्यावरण र पर्यटन आपसमा अन्योन्याश्रित बनेको छ । यससंगै वातावरण संरक्षणको कुरा पनि जोडिएको छ । पर्यटन विकासको दीर्घकालीन गुरूयोजना बनाउने हो भने कृषि, पर्यटन र पर्यावरण, धार्मिक, सांस्कृति पक्षलाई पनि समेट्नुपर्दछ । यही नै दीगो पर्यटनको आधार हो ।